6 Mienzaniso Yezvishandiso Zvekutengesa Uchishandisa Artificial Intelligence (AI) | Martech Zone
6 Mienzaniso Yekushambadzira Zvishandiso Uchishandisa Artificial Intelligence (AI)
Chishanu, May 6, 2022 Chishanu, May 6, 2022 Amra Beganovic
Artificial intelligence (AI) iri kukurumidza kuve imwe yeanonyanya kufarirwa kushambadzira buzzwords. Uye nechikonzero chakanaka - AI inogona kutibatsira kuti tiite otomatiki kudzokorora mabasa, kugadzirisa pachako kuedza kwekushambadzira, uye kuita sarudzo dziri nani, nekukurumidza!
Kana zvasvika pakuwedzera kuoneka kwemhando, AI inogona kushandiswa kune akati wandei emabasa akasiyana, anosanganisira influencer kushambadzira, kugadzira zvemukati, social media manejimendi, inotungamira chizvarwa, SEO, kugadzirisa mifananidzo, nezvimwe.
Pazasi, isu tichatarisa mamwe eakanakisa eAI maturusi evatengesi anogona kuvandudza shanduko yemushandirapamwe, kuwedzera kugona, uye kuwedzera kuoneka kwewebhusaiti:
AI-Inotyairwa Influencer Marketing
IMAI ndeye AI-inotyairwa pesvedzero yekushambadzira chikuva iyo inotitendera kuti tiwane ivo vanopesvedzera vakakodzera kurudzi, kuteedzera mashandiro avo, uye kuyera ROI. Chinhu chakakosha muIMAI isimba rayo rekutsvaga reAI rinokwanisa kutsvaga uye kuunganidza data pane yakanyanya niche influencers pa Instagram, Youtube, uye TikTok.
AI inopa mukana wekuti mabhureki awane uye kunanga zvakanyanya niche influencers mukati meindasitiri yavo. Kugona kweAI kukurumidza kuwana vapesvedzera kunobvumira IMAI kuve neakanyanya kusimba dhatabhesi.
Amra Beganovich, CEO wedhijitari yekushambadzira agency Amra naElma
Semuyenzaniso, mugadziri wemota anoda kuwana vanofurira mota vanongofarira mota dzemitambo vanogona kuwana niche vangangove vamiriri vemhando vachishandisa AI pasina kuvatsvaga nemaoko pasocial media. Uku kugona kwekutarisa tarenda iro rinoenderana zvakanyanya nemhando yechinangwa chedemographic inobatsira kuwedzera pesvedzero shanduko uye kuwedzera mushandirapamwe ROI.
Tora iyo IMAI Demo
AI-Inotyairwa Content Creation
Quillbot iAI-powered kunyora mubatsiri anogona kubatsira kugadzira zviri nani zvirimo, nekukurumidza. Inoshandisa mutauro wechisikigo kugadzirisa (NLP) kuongorora zvinyorwa uye kupa mazano ekuvandudza chidimbu chekunyora. Semuyenzaniso, Quillbot inogona kupa mamwe mazwi kana mitsara, kupa zvirevo zvakafanana, kana kupa matipi egirama.
Kushandisa AI kubatsira nekugadzira zvemukati kunotibvumira kuvandudza kushambadzira uye kugadzirisa kwewebhusaiti yedu uye zvemagariro media zvemukati. Semuyenzaniso, AI inotitendera kuti tiwedzere kukwezva kwepeji yekumhara kana bhurogi nekuita mazano pamashoko kana mataurirwo anogona kunzwika zvakanyanya uye anofinha.
Eliza Medley, maneja wezvemukati we Hostinger
Quillbot ine akati wandei maficha anogona kubatsira kusanganisira dhizaini dhizaini, cheki chekuongorora, uye chibodzwa chekuverenga. Iyo AI inogona kupa nhungamiro pakudzokororazve mazwi zvinyorwa kana mitsara uye kuita kuti iwedzere kunakidza.
AI-Inotyairwa Social Media Management
MeetEdgar is an AI-powered social media management chishandiso chinobatsira otomatiki kutumira pasocial media. Inotibvumira kugadzira mabhakiti emukati zvichienderana nemisoro, mazwi akakosha, kana kunyange hashtag. Iyo software inobva yazadza mabhakiti aya nemukati kubva kwakasiyana siyana, kusanganisira RSS feeds, blogs, uye zvinyorwa.
Kugara pamusoro pemaitiro kunopa mhando nemukana wekugadzira zvine musoro zvemukati kune vateereri vavo. Nekushandisa AI kuunganidza ichangoburwa indasitiri-inoenderana data, isu tinokwanisa kukwidziridza nzira yedu yesocial media kuti tibatane nevateereri vedu.
Reynald Fasciaux, COO we Studocu
MeetEdgar inotibvumirawo kuronga zvatinotumira pamberi, uye inoita kuti zvinyorwa zvedu zvitumirwe panguva dzakanakisa dzekubatikana. Semuenzaniso, kana isu tiine blog post yatinoda kugovera pasocial media, MeetEdgar ichatitendera kuti titange tagadzirisa kune inonyanya kunakidza uye ichangoburwa nhau dzeindasitiri, uyezve inogovera iyo positi panguva yakatarwa zvichienderana nekuita kwevateereri. mapatani.
Edza Edgar Yemahara
AI-Inotyairwa Lead Generation
LeadiQ ndeye AI-powered inotungamira chizvarwa chishandiso icho chinotibatsira kuwana uye kukodzera vanotungamira, nekukurumidza.
LeadiQ inoshandisa akati wandei akasiyana data masosi kuwana anotungamira, anosanganisira social media, mabhodhi ebasa, uye madhairekitori ebhizinesi. Kana LeadIQ yangowana inotungamira, ichashandisa NLP kuongorora kuvepo kwevanotungamira pamhepo uye kuhwina kutungamira zvichibva pakukwanisa kwavo kufarira chigadzirwa kana sevhisi.
Kushandisa AI kuita otomatiki kuedza kwekusimudzira bhizinesi kunopa mukana wekuwedzera kusimbisa kunaka kwehukama pakati pemhando nevatengi. Inopa mukana wekutarisa zvakanyanya pahunhu hwehukama hwehukama nekuchengetedza nguva pabhuku rekushandisa uye dzimwe nguva inorema kwazvo nzira yekutsvaga vatengi.
Berina Karic, maneja wekushambadzira ku Yepamusoro Influencer Marketing Agency
LeadiQ inogona kushandiswa kumisikidza otomatiki lead yekusimudzira mishandirapamwe, saka tinokwanisa kuramba tichibatana nevanotungamira kunyangwe ivo vasati vagadzirira kutenga ipapo. Semuenzaniso, isu tinokwanisa kuseta software yekutumira akatevedzana emaemail kune inotungamira nekufamba kwenguva, kana kutovapa runhare kana vasina kupindura maemail ako.
Tanga neLeadiQ Yemahara
AI-Inofambiswa Kutsvaga Engine Optimization
Moz Pro ndeye AI-powered Search Engine Optimization (SEO) chishandiso chinobatsira kuvandudza mawebhusaiti chinzvimbo mumainjini ekutsvaga.
Moz Pro inoshandisa akati wandei akasiyana data masosi kuongorora webhusaiti uye kupa mazano ekuvandudza SEO yemhando.
Moz inotitendera kuti tipinde mukati meiyo yakaderera yakaoma mazwi, uye tsvaga niche mazwi akakosha anogona kufuratirwa nevakwikwidzi. Izvi zvinopa mukana wekugadzira hurongwa hwekushambadzira hwemukati hunobva panzira yekuongorora pane kufungidzira, kureva kugadzira zvinyorwa kana mapeji ekumhara ayo mudzidziso anonzwika zvakanaka asi anogona kusagashira traffic.
Chris Zacher, Content Marketing Strategist pa Intergrowth
Moz Pro inobatsira mukutsvaga anonyanya kushanda mazwi ekunongedza, kupa mazano ekuvandudza zita rewebhusaiti uye meta tags, uye inoteedzera masanji nekufamba kwenguva. Iyo ine akati wandei mamwe maficha anogona kubatsira kuvandudza brand's SEO, kusanganisira yekubatanidza-yekuvaka chishandiso, saiti yekuongorora chishandiso, uye yemakwikwi ekuongorora chishandiso.
Tanga Yako Moz Pro Muedzo
AI-Inotyairwa Photo Editing
Luminar AI mupepeti wepikicha anoshandisa AI kurerutsa kugadziridza mafoto uye kuita kuti iwanikwe kune vanotanga kana mafoto vari kutsvaga kukurumidza kurongedza pachiyero. Inopa vashandisi kugona kugadzira mifananidzo yakaita sePhotoshop nekungodzvanya zvishoma nekuverenga otomatiki mufananidzo wacho uye kuona zvakasiyana siyana zvawo, kusanganisira kumashure, zviso zvechiso, zvipfeko, nezvimwe.
Luminar inopa mukana kune vasiri-Photoshop nyanzvi kuti vagadzire zvidimbu zvakasarudzika zvemukati izvo zvinonyanya kugashira kubatanidzwa uye shanduko. Nekungodzvanya kushoma, tinogona kugadzirisa kumashure kwemufananidzo, ganda rakatsetseka, kupenya maziso, uye kupedzisa mamwe mabasa anowanzoda maawa ekugadzirisa.
llija Sekulov, Digital Marketing & SEO pa Mailbutler
Tarisa kunze kweLuminar AI
Ramangwana reAI muKushambadzira
Zvishandiso zveAI zvinogona kuvandudza zvakanyanya kuedza kwekushambadzira nekubvumira vatengesi kuti vavandudze mashandiro, kuwedzera kuoneka, kuwedzera shanduko, nezvimwe! Ivo vari kukurumidza kuita chikamu chekuedza kwedu kwezuva nezuva kushambadzira uye vanogona kuwedzera kuva akawanda emabasa atinopedzisa pakukura brand. Nekushandisa AI kukwirisa mishandirapamwe yedu, tinogona kuita otomatiki mabasa, kugadziridza kushambadzira, uye pakupedzisira kuita sarudzo dziri nani, nekukurumidza!
Tags: aiai zvishandisoAmra naElmachakagadzirwa njerematurusi enjere dzekugadziraberina karicchris zacherkugadzira zvemukati aiContent Marketingcontent marketing aiEdgarediting aimaikushambadzira kushambadzirainfluencer marketing aiintergrowthleadiqllija Sekulovluminar aimailbutlermetedgarmoz pronlpmufananidzo aiphotos foraPhotoshopquillbotReynald Fasciauxkutsvaga injini optimization aiseo aievanhu vezvenhausocial media aiStudocutop influencer marketing agency
Ms. Beganovich ndiye CEO uye muvambi we Amra naElma's. Iye anonyanya kupesvedzera ane vanopfuura miriyoni vateveri pamatanho ake. Akadomwa senyanzvi yepamusoro yekushambadzira yedhijitari neForbes, Business Insider, Financial Times, Entrepreneur, Bloomberg, WSJ, ELLE Magazine, Marie Claire, Cosmopolitan, uye zvimwe zvakawanda. Anovandudza uye anotonga mishandirapamwe yekushambadzira yemakambani eFortune 1, anosanganisira Johnson & Johnson, LVMH, Procter & Gamble, Uber, Nestle, HTC, uye Huawei.
Lucidchart: Bata pamwe uye Kuona Ako Wireframes, Gantt Charts, Matengesi Maitiro, Marketing otomatiki, uye Mutengi Rwendo.
Privy: Kurisa Yako Yekutengesa Chitoro Chepamhepo Neiyi Yakazara Ecommerce Kushambadzira Platform